ခပ်လှမ်းလှမ်းက ပန်းခရမ်းရောင်စွယ်တော်တွေက နိုင်ငံရေးသိပ္မံ ဘာသာရပ်ထက် စွဲငြိစရာကောင်းတာကြောင့် ဒီLဆောင်က အချိန်တွေ မဖျက်ဖြစ်တာပဲလား…။ အမှတ်တမဲ့နဲ့Lဆောင် မှန်ပြူတင်းကို ကြည့်မိတော့ မြင်တွေ့ နေကျ ကောင်လေးနံဘေးက လူတယောက်ကို မှတ်မှတ်ထင်ထင် ရှိသွားခဲ့တယ်။ လှိုင်းခပ်ကြီးကြီးတွေပါတဲ့ ဆံပင်အကြီးကြီးရယ်… အောက်နားလေးမှာ ဘဲဥပုံလိုဖြစ်သွားတဲ့ မျက်မှန်ကြီးကြီးရယ်… ပြီးတော့ အဆင်ကြီးကြီး ဟာဝေယံရှပ်ရယ်… ။ အတော်ခင်စရာကောင်းတဲ့သူပဲ။
သူငယ်ချင်းက စာအုပ်ပေါ်မှာ တခုခုရေးပြီး ကိုယ့်ကို လှမ်းပေးတယ်။ စာသင်ချိန်တွေမှာ ဒီလို စာအုပ်နဲ့စကားပြောတတ်တာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။ “ဟိုမှာ မျက်ကပ်” တဲ့။ အဲဒီကောင်လေးရဲ့ မျက်လုံးတွေက နှာခေါင်းနားအတော်ကပ်နေတာမို့ကိုယ်တို့ အုပ်စုမှာ Nick Name ပေးခဲတဲ့ ထူးက ပေးခဲ့တဲ့ နာမည်။ ထူးစာအုပ်ပေါ်မှာ ကိုယ်ပြန်ရေးလိုက်တယ်။ “သူ့ ဘေးက တယောက်က ဆံပင်က အကြီးကြီးပဲနော်… ရယ်ရတယ်… ခင်စရာပဲ” လို့ ။ ထူးနဲ့ ထိုက် ကိုယ့်စာဖတ်ပြီး ဟိုလူကြီးဆီ အကြည့်ရောက်ပြီး တခစ်ခစ်ရယ်ကြတယ်။ အဲဒီလူကြီးကတော့ မျက်ကပ်ဘေးမှာ သစ္စာရှိစွာနဲ့အပါးတော်မြဲလို့ ။
မှတ်စုစာအုပ်အောက်က ထူးအိမ်သင်သီချင်းစာအုပ်လေး အကြည့်ရောက်သွားပြီး စိတ်ထဲက တိုးတိုးလေး ညည်းမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက စတွေ့ ပြီး မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိခဲ့မိတဲ့ အဲဒီလူကြီးက ထူးအိမ်သင် သီချင်းတွေ စွဲမက်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆိုတတ်လိမ့်မယ်လို့ကိုယ်သံသယမရှိခဲ့တာ အမှန်ပဲ။
1-3/16 အခန်းရှေ့ မှာ လူကြားထဲ ပါတိတ်အဆင်ကြီးကြီး ရှပ်အကျီ်ကို အပြင်ထုတ်ဝတ်ပြီး ပုဆိုးတိုတိုနဲ့အဲဒီလူကြီးကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လိုက်ရတော့ ဘာရယ်မဟုတ် ကိုယ်ပြုံးမိတယ်။ သူ့ ကိုတွေ့ လိုက်ရင် အမြဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့အတော်အေးအေးလူလူ နေတတ်မယ့်ပုံ။ လမ်းလျှောက်ရင် လက်တဘက်ထဲ လွှဲလျှောက်တတ်တာကို ကိုယ်ကလဲ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ သတိထားမိသေးရဲ့။
ခုလောလောလတ်လတ် ၀ယ်ထားတဲ့ လက်ရေးကဗျာစာအုပ်လေးထဲက ကိုသျှားကဗျာတပုဒ်ကို ဖတ်နေရင်း ဆရာရောက်လာတော့ ခပ်ဝေးဝေးရောက်သွားတဲ့ ပါတိတ်အကျီ်ကြားကြားကို လှမ်းတွေ့ လိုက်ရတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း 8-1/2မှာ… နွေးအေးမှာ… ကားပတ်ကင်မှာ… မျက်ကပ်နဲ့ အတူ တွေ့ ရစိတ်လွန်းတော့ မျက်မှန်ကြီးကြီးအောက်က အဲဒီလူကြီးရဲ့ မျက်ရစ်မပါတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ တောင် ကိုယ်ကရင်းနှီးလာသလို။
တွဲတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့မေဂျာ ကွဲသွားရတော့ ရင်ထဲဟာတာတာ။ အတန်းထဲ ၀င်လာသူတွေကို တယောက်ပြီးတယောက်ငေးရင်း လိုက်မှတ်နေတုန်း… ဗြုန်းဆို အဆင်ကြီးကြီး စီဝိုင်စီအကျီ်ကြီးနဲ့အဲဒီလူကြီးကို တွေ့ လိုက်ရတော့ ဘာရယ်မဟုတ် ကိုယ်ဝမ်းသာသွားမိတယ်။ သူနဲ့ ကိုယ် စကားမယ်မယ်ရရ မပြောဖူးပါပဲ ဆွေလိုမျိုးလို ကိုယ့်စိတ်ထဲ ရင်းနှီးနေမိတာ ထူးဆန်းသားလား။ မျက်မှန်အောက်က မျက်လုံးတွေက ကိုယ့်ဆီအရောက် သူကယောင်ယောင်လေး ပြုံးပြသွားတယ်။ သူ့ ပုံကြည့်ရတာ ကိုယ်ဒီမေဂျာရတာ သိပြီးနေသလို။ ပြီးတော့… မေဂျာကွဲသွားတဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းလေးအတွက် ကြေကွဲနေသလို။
ပထမနှစ်ကတည်းက မတွဲဖြစ်ပေမယ့် ရင်းနှီးလက်စရှိတဲ့ ကောင်မလေး သုံးယောက်ကို ပြုံးပြလိုက်တယ်။ စကားဖောင်ဖွဲ့ တတ်တဲ့ ကိုယ့်အကျင့်အတိုင်း စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ ။ ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့မြန်မာအကျီင်္လေးတွေ ၀တ်တတ်တဲ့ အမြဲပြုံးနေတတ်တဲ့ မဟာဆန်သူလေးရယ်… ရှပ်အကျီ်ပွပွလေးတွေ အမြဲဝတ်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးနဲ့ တူတဲ့ ကောင်မလေးရယ်… မျက်မှန်လေးနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစကားပြောတတ်တဲ့ ကောင်မလေးရယ်… ပြီးတော့ ကိုယ်ရယ်။ အဲဒီလူကြီးနဲ့ ကိုယ်တို့ တွေ အမျိုးတော်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်မှတ်ခဲ့ဘူး။
“ညည်းတို့ ကို ငါက programming ရှင်းပြမယ်… ငါ့ကို ညည်းတို့ က Microwave ရှင်းပြ”
ကိုယ်တို့ ကို အဲဒီလူကြီးက သူ့ တူမတွေကို စကားပြောသလို ညည်းတို့ လို့နာမ်စားသုံးပြီး ပြောတတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ သူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန် လွယ်လွယ်ကူကူ ခင်မိသွားသလားမသိ။ သူနဲ့ စကားပြောရတာ ကိုယ့်ဆွေကိုယ်မျိုးနဲ့စကားပြောရသလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်။ ဘာအထာမှမရှိ။ သူဝတ်ထားတဲ့ အ၀ါရောင်တောက်တောက် တီရှပ်ပေါ်က ကာတွန်းရုပ်လေးကြည့်ပြီး သူ့ အကြိုက်ဆုံးအရောင်က အ၀ါရောင်ထင်ရဲ့လို့ကိုယ်ကအတွေးနယ်ချဲ့ နေမိတယ်။
သူနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်မှ သူ့ ပုံစံနဲ့ မဆီမဆိုင် သိခဲ့ရတာတွေ…. လူကသာ လူကြီးပုံဖြစ်ပေမယ့် သူက ကိုယ့်ထက်တောင် ၆လ ငယ်သေးတာရယ်… သူ့ အိမ်ကကြောင်လေးတွေ အကြောင်းပြောပြတဲ့အခါ သူ့ မျက်လုံးတွေပြုံးနေတာရယ်… ပြီးတော့ သူဂီတာကို ခုံခုံမင်မင် တီးတတ်တာရယ်… ထူးအိမ်သင်သီချင်းတွေ အရူးအမူးကြိုက်တတ်တာရယ်။
ကျောင်းရှေ့ တိုင်လုံးကြီးတွေ နောက်ခံထားပြီး လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ရယ်မောနေကြတဲ့ ကိုယ်တို့၎ ယောက်ရဲ့ ကျောင်းသူဘ၀လွတ်လပ်ခြင်းတွေ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးပြန်ကြည့် ဖြစ်ရင် အဲဒီလူကြီးကို လွမ်းတတ်တယ်။ (သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ အလွမ်းနဲ့ ပါ)။ အဲဒီဓာတ်ပုံလေးကို ကိုယ်တို့ နောက်ဆုံးနှစ်က သူရိုက်ပေးခဲ့တာ။
နောက်ဆုံးနှစ်အမှတ်တရ စာအုပ်လေးထုတ်တော့ သူ့ အော်တိုစာမျက်နှာမှာ ကိုယ်က သူ့ အတွက် ကောင်မလေးတယောက်ရှာပေးဖို့တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဦးလေး လူပျိုကြီးတယောက်အတွက် တူမက ကြင်ယာရှာပေးချင်ရုံသက်သက်ပါ။ ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ဝင်တဲ့အထိ သင့်တော်တာလေးများတွေ့ ရင် ကိုယ်က သူ့ ကို သတိရနေမိတယ်။
ပြန်တွေ့ တဲ့အခါ သူ့ ဆံပင်အကြီးကြီး ပျောက်သွားတယ်။ အဲဒီဆံပင်အကြီးကြီးကို လွမ်းလိုက်တာ။ ကိုယ် သူ့ ကို စခင်မိတဲ့အထဲမှာ ဆံပင်အကြီးကြီးက စတာမိုလား။ ပြီးတော့ အဆင်ကြီးကြီး အကျီင်္တွေ သူ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ မတွေ့ ရပဲ ရှပ်အဖြူလက်ရှည်ကို ပုဆိုးထဲ ထည့်ဝတ်လို့ … ကိုယ့်စိတ်ထဲ အရင်က ကိုယ်တို့ ဦးလေးမဟုတ်တော့သလို… ခပ်စိမ်းစိမ်းနဲ့ ။ လူကြီးအတော်ဆန်သွားတဲ့သူက ကွန်ပြူတာတွေကြားထဲမှာ ပျော်နေခဲ့ချိန်… ကိုယ်ကတော့ ကျောင်းတုန်းက ကလေးဆန်တဲ့အကျင့်တွေ မပျောက်ပဲ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့အလုပ်ခွင်မှာ လူကြီးမဖြစ်တဖြစ်။
အမှတ်မထင် သူနဲ့ ပြန်ဆုံတဲ့အခါ ရင်ထဲပိုလို့နွေးထွေးခဲ့မိတယ်။ ကျောင်းကို လွမ်းနာကျနေတဲ့ ကိုယ်က ကျောင်းတုန်းက အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူ့ ကို ပြန်အတွေ့စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ လို့ မကုန်။ အနာဂတ်အကြောင်းတွေလဲ ပြောဖြစ်ကြသေးရဲ့။ ခပ်ဝါးဝါး အနာဂတ်လမ်းတခုပေါ် ကိုယ်တို့စမ်းတ၀ါးဝါး လျှောက်နေကြတဲ့အချိန်။
တစုံတခုသောအကြောင်းကြောင့် သူနဲ့ ကိုယ် မကြာခဏ ပြန်ဆုံမိခဲ့တယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ညနေရုံးကပြန်ရောက်ချိန်ဆို သူ့ ဖုန်းသံကို ကိုယ်က မျှော်တတ်လာတယ်။ ကိုယ်တကယ် မေ့လျော့နေခဲ့မိတာ။ အရင်က သူဘာကြောင့် ကိုယ့်ဆီ ဖုန်းဆက်ဖို့သတိမရပဲ ခုမှ နေ့ တိုင်းလိုလို ဖုန်းတွေ ဆက်နေခဲ့ရတာလဲ။ များသောအားဖြင့် ဖုန်းဆက်သူက နားထောင်သူဖြစ်ပြီး… ကိုယ်က ကိုယ့်အကျင့်အတိုင်း စကားတွေဖောင်ဖွဲ့နေတတ်တာ။ သူ့ ဖုန်းသံတွေ စိတ်လာတော့ မေမေက သံသယစကား တခွန်းပြောခဲ့တယ်။ သံသယ…. ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်ကြားက အဖြူရောင်နံရံတခု ပါးသထက်ပါးလျလာတာ ကိုယ်တကယ် သတိမထားမိခဲ့တာပါ လူကြီးရေ။
အဖြူရောင် ဗလာစာရွက်ပေါ်မှာ ခပ်ရှင်းရှင်းရေးထားတဲ့ ကဗျာသိပ်မဆန်လှတဲ့ စာတစောင်ကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် အလွတ်ရတဲ့ အထိ ကိုယ်ဖတ်နေမိခဲ့တယ်။ ဘယ်အရာတခုက ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်ကြားကို ခပ်ဆိတ်ဆိတ်ဝင်လာပြီး ပါးလျနေတဲ့ နံရံပါးပါးကို ဖြိုချခဲ့သလဲ။ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ မေးခွန်းတွေ မေးလိုက်။ အဖြေတွေဖြေလိုက်။ သံယောဇဉ်တွေကို ရေလိုက်နဲ့ ။ တယောက်ထဲ ရူးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေ။
ကိုယ့်နာမည်ကို တိုးတိုးလေးတလုံးထဲ သူခေါ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ သူ့ ကို ပေးဖို့ အဖြေတခု ဘာကြောင့် အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သလဲ။ ထူးဆန်းလိုက်တာ လူကြီးရေ။ ဆယ်နှစ်လုံးလုံး ကိုယ့်နံဘေးမှာ သူရှိနေတုန်းက ဘယ်မှာ သွားရောက်ခိုပုန်းနေခဲ့တဲ့ အဲဒီအရာက ခုကျမှ ဘာကြောင့် ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်ကြားကို ရုတ်တရက် ရောက်လာခဲ့သလဲ။ သူပေးခဲ့တဲ့ အကောင်လေးတကောင်နဲ့ တူတဲ့ ဘောပင် လိမ္မော်ရောင်လေးကို မသုံးရက်ပဲ တိတ်တိတ်သိမ်းထားမိခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ။ ကိုယ်တကယ်မသိတော့ဘူးလေ။
ကိုယ်က စောင့်ဆို သူက တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် စောင့်နေခဲ့တယ်။ ကိုယ်က လာဆိုမှ သူလှမ်းလာခဲ့တယ်။ သူများ သမီးရီးစားတွေလို ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ ကိုယ်ပေးတဲ့ဘ၀မှာ သူနေသားကျအောင် နေပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ်က နေရစ်ခဲ့ဦး ဆိုတော့လဲ သူမတားရက်ပဲ တယောက်ထဲ နေခဲ့တယ်။
တကယ်ဆို ထားရစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ကပဲ ရူးမတတ်လွမ်းခဲ့တာ။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ဆုံနေကျ အင်းလျားကန်နံဘေးက သစ်ပင်လေးကို ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ ထိုင်ခုံလေး။ အင်းလျားကန်နံဘေးဆိုလို့ကဗျာဆန်ဆန်လေးမှ မဟုတ်တာ။ ဘယ်သူမှ မသိတဲ့ လူသူရှုပ်ထွေးတဲ့ ကိုယ်တို့ ရုံး အ၀င်ဝက ခုံတန်းလေးပေါ့။ သူနဲ့ ပြန်ဆုံရဦးမှာလား… ပြန်မဆုံရတော့ဘူးလား… ရည်ရွယ်ချက်တွေနောက် လောဘတကြီးလိုက်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်က တကိုယ်ကောင်းဆန်သူပါ ချစ်သူရေ။ တခါတခါ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို လွှင့်ပစ်ပြီး ကိုယ့်လက်လေးကို ဖွဖွဆုတ်ကိုင်တတ်တဲ့ သူ့ ဆီသာ ထွက်ပြေးလိုက်ချင်မိတယ်။ လွမ်းတယ်မောင်။
သူက ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို တဖွဖွမဆိုတတ်ပေမယ့် အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရရင် မတည်မငြိမ်သွေးပျက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် လူကြီးဆန်လာအောင် မသိမသာ ပုံသွင်းပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားမိတဲ့အခါ… သူ့ ကို ကိုယ်အတန်တန် ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ သူက ဒါလုပ်လို့ကိုယ့်ကို ဘယ်တော့မှ အမိန့်မပေးခဲ့ပေမယ့် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို ပါးနပ်စွာ ချပြပေးခဲ့တာ ကိုယ်တောင် မရိပ်မိလိုက်ပဲ… ရိပ်မိသိရှိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်က သူချပြပေးခဲ့တဲ့ လမ်းပေါ်မှာ အတော်တောင် ခရီးရောက်ခဲ့ပြီလေ။
သူ့ ဆီက ရင်ခုန်လှိုက်မောစရာ ကဗျာဆန်ဆန်လက်ဆောင်ဘာတခုမှ မရခဲ့ဘူးပေမယ့်… သူ့ အတွေ့ အကြုံလေးတွေ ဝေမျှရင်း… သူ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေ ဖြန့် ဝေရင်း… လောကကြီးကို ရင်ဆိုင်တတ်ဖို့သူပေးခဲ့တဲ့အင်အားတခုဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်တခုပါပဲ။ သူပေးခဲ့တဲ့ သူပေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ သူပေးနေဦးမယ့် အိမ်ထောင်တခုရဲ့ အဆီအနှစ်ဖြစ်တဲ့ လှပတဲ့ သစ္စာတရားနဲ့အေးမြတဲ့မေတ္တာတရား လက်ဆောင်လေးတွေထက် ကိုယ်က ဘာများလိုအပ်ဦးမှာလဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သောမောင်… ဒီမွေးနေ့ မှသည် ချစ်တဲ့ မိသားစုလေးနဲ့ အတူ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့မွေးနေပေါင်း ရာထောင်သောင်းတိုင်ပါစေလို့ …။
(25-Oct-2009 မှာ ကျရောက်တဲ့ ချစ်သောခင်ပွန်းမွေးနေ့ အမှတ်တရ)
ကွမ်းယာလေးမြုံ့ပြီး ပြုံးပြုံးကြီး ဖတ်နေမှာ မြင်ယောင်မိသေး...
အမတန်ခူးတို့များ စပ်မယ်ဟပ်မယ်ဆိုတာ ကျောင်းကတည်းကပါလား...
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုကလေး ငြိမ်းချမ်းအေးမျှပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာ
လှပတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ လှလို့ချစ်တာမဟုတ်တဲ့ ချစ်လို့လှသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘွဲ့လေးပေါ့။
မတန်ခူးချစ်တဲ့ မောင် ရဲ့ မွေးနေ့မှသည် အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုလေး အခုလိုပဲ အမြဲပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
(မတန်ခူးရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီးရင် သူက ဘာတွေပြောသလဲ ဆိုတာ ပြန်ပြောဦးနော်)
အဟီး..ဘာလဲလို့ ဆက်ဖတ်လာတာ။ မောင်က မောင်ကိုး။
ရေးထားတာ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ
မတန်ခူးရဲ့ ဟိုလူကြီးတဖြစ်လဲ မောင်ရေ။
တန်ခူးချစ်သော...မောင်..ရဲ့ မွေးနေ့ အမှတ်တယပေါ့လေ..။
ကြည်နူးဘို့ ကောင်းလိုက်တဲ့ချစ်ခြင်းတရား....
( ကျနော်လဲ မရောက်တာကြာနေပါပြီ..မတန်ခူးလဲ တူတူဘဲ)
မတန်ခူးရဲ့ မောင်... ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့နဲ့အတူ ဘ၀ခရီးမှာ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေဗျား....
တန်ခူးနဲ့ မောင်နဲ့ အတူတကွ လှပတဲ့ မိသားစုဘ၀ နှစ်များစွာတိုင် ခိုင်မာပါစေ...။ (တကယ်လွမ်းမောစရာကောင်းတဲ့ အချစ်ကလေးပါပဲ..)
အဲဒီလူကြီးကို ကျနော်ကလည်း ခင်ပါသဗျား။
တရက် ကျောင်းကို ရောက်တော့ အီးစီဌာနကို ၀င်လိုက်တဲ့အခါ တန်ခူးတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီးဆိုတာကို အစ်မကြီးမိုးက ချက်ချင်း ဆီးပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့ (ကျနော်နဲ့ ဟန်သက်အောင်) လည်း အမ်စီစီရောက်တော့ အစ်ကို့ကို ၀မ်းသာအားရ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းလုပ်တော့ “မင်းတို့ကို (---) ပြောလိုက်တာမို့လား။ (---)ခွေးမလေး။ လျှောက်ဖွနေတယ်” လို့ ပြုံးပြုံးကြီး ပြောပါသဗျား။ ကျနော်တော့ တတိယနှစ် ဖရက်ရှာဝဲလ်ကမ်းမှာ ရေခဲတုံးတွေ၊ အအေးပုလင်းတွေ ထည့်ပြီး စိမ်ထားတဲ့ ဒန်အိုးကြီးထဲက အအေးပုလင်းတွေကို ဒိုင်ခံနှိုက်ထုတ်ပေးနေတဲ့ အစ်ကို့ပုံကို မြင်ယောင်မိတုန်း။
အစ်ကို့မွေးနေ့မှစ၍ (မွေးနေ့ကတော့ လွန်သွားပြီ) တန်ခူးတို့ တမိသားစုလုံး စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေသတည်း။
အစ်မတို့ ဇာတ်လမ်းလေးက ကြည်နူးစရာလေး။ အခု ဆံပင် အကြီးကြီး ပြန်ထားခိုင်းလိုက်ပြီလား :D။
မတန်ခူးသရုပ်ဖော်တာ မျက်စိထဲ မြင်ယောင်လိုက်တာ၊ ဆံပင် အကြီးကြီးကို...
ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟိုလူကြီး ဘယ်လို ဆက်စပ်နေလဲ စဉ်းစားနေတာ.. ပြီးခါနီးမှ ဟိုလူကြီး= မောင် ဖြစ်နေတာကိုး......
အဟမ်း...အဟမ်း...မတန်ခူးရဲ့ ဟိုလူကြီး ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ...... :))))
ဝတ္ထုရေးတယ် မှတ်တာ။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုး။
:) သိပ်ကြည်နူးစရာကောင်းမှာပဲနော်။ အဲဒီစုံတွဲလေးပုံကို မြင်ဖူးချင်လိုက်တာ။
မမရဲ့ ဟိုလူကြီး ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီးပြီလားဟင်... အမ အမျိုးသားတော့ မသိဘူး.. ကျနော်တော့ ဖတ်ရင်း ကြည်နူးလိုက်တာ.. အမက စာရေးတာတော်တော့ အရမ်းအသက်ပါတာပဲ.. :)
Happy Birthday !! Friend !!
ရေးလည်းရေးတတ်ပ မမရယ်... အားကျတယ်...
မွေးနေ့ရှင်တစ်ယောက် ပီတိပြုံးနဲ့ ကျေနပ်နေမှာ မြင်ယောင်မိတယ်
very lovely post,...
ama.. so nice post.
happy birthday to ur maung.
Happy Birthday ပါ လို့...
မောင် ရဲ့ မွေးနေ့မှသည် အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုလေး အခုလိုပဲ အမြဲပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်...။
တန်ခူးရေ... ကမ္ဘာကြီး အကြောင်း ကြိုက်သလို ပြင်ပြီးရေးနိုင်ပါတယ်... :)
တန်ခူးရေ ... ခုမှဖတ်ဖြစ်တယ် ... ဟုတ်ပ ... တန်ခူးလူကြီးက စကားပြောရင် ညည်း ... ညည်းနဲ့ သတိထားမိတယ်တော့ ... ခုမှ တန်ခူးတို့ ဇာတ်လမ်းကိုသိရတာ ... သူငယ်ချင်းရေးတာ ကြည်နူးစရာလေး။
နာတို့ သယ်ရင်း ဟိုလူကြီးတော့ ကွမ်းသွားတွေ ပေါ်အောင် ပြုံးနေတော့မှာ ... မြင်ယောင်သေး ...
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ... သူငယ်ချင်းရေ ...
နောက်ကျမှ ရောက်ရတယ် ...
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေသော်ဝ် တန်ခူးရဲ့ လူကြီးရေ.. ဟေးးးဟေးး
ပျော်စရာကြီးနော် တန်ခူးရေးတာ ဖတ်ရင်း
အဲဒီတိုင်ကြီးတွေ နောက်ခံထားပြီး ကိုယ်တို့ ၂ ယောက်လဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်။ လွမ်းလိုက်တာ...
တန်ခူးရေ..ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ..ဇာတ်လမ်းလေး သိချင်နေတာ..ဟဲဟဲ..ဂလိုကိုး..ကျောင်းပြီးတော့မှပေါ့။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာများနဲ့ ပြည့်စုံလွှမ်းခြုံထားတဲ့ တန်ခူးတို့ရဲ့ သီရိဂေဟာလေးရဲ့ အိမ်ဦးနတ် တန်ခူးရဲ့မောင်ရဲ့ မွေးနေ့မှသည် သည်မိသားစုလေးနဲ့အတူ သက်ဆုံးတိုင်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ...(နောက်ကျဆုတောင်း):)
ချိုသင်းက ၂၅ရက်ကတည်းက လာဆုတောင်းတာပါ နော်။ မမ ဒီပို့စ် မတင်ခင်ကတည်းကနော်။
အမ ရေးထားတာ ပေါ်လွင်လွန်းလို့ အကို့ကို မမြင်ဖူးပေမဲ့ ခင်သွားပြီ။ အောက်တိုဘာ ၂၅ရက် မွေးတဲ့လူတွေက သဘောကောင်းတယ် ထင်ပါ့ မမရေ။ တရက်တည်းမွေးသူချင်းနဲ့ ဖူးစာဆုံရတဲ့ ညီအမတွေ တနေ့ ဆုံချင်လိုက်တာ..
ပို့စ်ထိပ်က... လက်ရေးစာလေး ရယ်.. ချစ်စဖွယ်..ကြည်နူးဖွယ်..အဖွဲ့လေးတွေရယ်..
ဖခင်လို..ချစ်သူလို..ခင်ပွန်းလို.. ဆံပင်ကြီးကြီးနဲ့..စီဝိုင်စီ အကျီ င်္ ၀တ်ထားတဲ့.. လူတယောက်ရယ်ကို မြင်ယောင် ကြည့်သွားတယ်..စလုံးရောက်ရင်တော့..မေးစမ်းပြီး လာလည်အုံးမယ်။း)
စကားမစပ်..ကျမ စိန်ပန်းကံ့ကော်ကို လာနှိုးသွားတာလည်း ကျေးဇူးနော်..ခရီးလွန်နေလို့..အခု..အင်ဂျင်ပြန်နှိုးနေပြီ..း)
Happy Birthday ပါ အမတန်ခူးရဲ့ ဟိုလူကြီးရေ (မရိုသေတာ မဟုတ်ပါဘူးနော် ခင်လို့ပါ :P) စီနီယာ စုံတွဲကို ဂျူနီယာ စုံတွဲက လာအားကျ သွားပါတယ်။
A Ma Yae!
Very good present for your lover!